Buckhead luxury 2 lokulala Condo + Indawo yokupaka yasimahla
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguJalynn
Ikhaya elihle elisandula ukwakhiwa langoku lihambe, lineembono ezimangalisayo, umatrasi weMemory Foam Queen kunye nemibono yebalcony ebekwe eBuckhead, Atlanta. Indawo yabucala ibonelela ngeendawo zokupaka igaraji SIMAHLA ezifumanekayo ngokufikelela ngokulula. Ukonwabele ukuthenga ezikumgangatho wehlabathi ePhipps Plaza, eLenox Mall, kunye neevenkile ezikwinqanaba eliphezulu kwiLali yokuhamba umgama ukusuka kwikhondom. Le condo ibonelela ngezinto eziluncedo ezinje: 24/7 ukufikelela kwindawo yokuzivocavoca, iphuli eshushu, kunye neNetflix YAMAHHALA eneWiFi enesantya esiphezulu.
Le yindawo ekhethekileyo yeendwendwe zabucala. I-condo intle ngembonakalo entle yesixeko. Ngomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi ezinebalcony ebanzi kwaye ineplani yomgangatho ovulekileyo wale mihla kunye nokuhamba okuphangaleleyo kwi-closet w / Iron kunye nebhodi yentsimbi. Icondominium inawo wonke umgangatho omhle weplanga weplanga onekhitshi eligcweleyo, kunye nomenzi wekofu wesintu onesitshizi sokuhlamba izitya esitsha. Igumbi lokuhlambela linomgangatho wanamhlanje wethayile, ibhedi yeMemory Foam Queen, iseti yePremium UGG Comforter etofotofo ngendlela emangalisayo,Isofa yesikhumba egudileyo. IiTV ezintathu eziNyulwe "50" 4K smart tv ezinofikelelo olukhawulezayo lweWiFi. Izixhobo ezitsha zentsimbi engatyiwayo, iwasha/Isomisi, izixhobo zokupheka, izitya, umenzi wekofu. Ikhondomu kukuhamba umgama ukusuka kudederhu lweevenkile iLenox Square kunye neendawo zokutyela ezininzi ongakhetha kuzo. Ukungena ngaphandle kweKeyless kubonelelwe ngendlela ekhuselekileyo nekhuselekileyo yokungena kwikheshi nezinto eziluncedo, igaraji yokuPaka.
Buza malunga nephakheji yethu yoTHANDO lwemihla yokuzalwa okanye isikhumbuzo esibandakanya ukuhombisa indawo ngeepedali zerose kunye nebhotile ye-champagne okanye iwayini ukothuka okuhle kwiqabane lakho. Nceda ubuze xa Ubhukisha !!!
Ngokubhukisha le condo uyavuma ukuba ufunde ngokupheleleyo kwaye uya kulandela yonke iMithetho yendlu, iMigaqo, imigaqo-nkqubo kunye nemiqathango. Ngokubhukisha uyavuma ukuthobela ngokuzenzekelayo ukupheliswa ngoko nangoko kogcino lwakho ukuba wena okanye nawaphi na amalungu eqela lakho aphule nayiphi na imigaqo, imigaqo, imigaqo-nkqubo kunye neemeko ngaphandle kwembuyekezo.
Umbuki zindwendwe ngu- Jalynn
Hey, im Jalynn I am a very easy going host but strict on making sure guest follow the rules I have in place. I manage the property and look forward to hosting your stay with us.
Ifumaneka 24/7 Ukufowuna okanye thumela umyalezo nangaliphi na ixesha ndikhetha umbhalo kodwa ungafowuna ukuba yingxakeko nangaliphi na ixesha. Undwendwe luya kuba nokufikelela kuyo yonke i-Condo.